Xaaska Amiirka Dubai oo Magangelyo ka codsatay Maxkamada London • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Xaaska Amiirka Dubai oo Magangelyo ka codsatay Maxkamada London
Xaaska Amiirka Dubai oo Magangelyo ka codsatay Maxkamada London
July 31, 2019 - By: Hanad Askar
Amiirada Haya Bint Al Hussein oo uu qabo Amiirka Dubai Mohamed Makhtoum ayaa dacwad ka gudbisay ninkeeda iyadoo codsatay in la furo isla markaana Maxkamada London ee Uk ay siiso magangelyo iyada iyo caruurteeda.
Prinses Haya Bint Al Hussein oo la dhalatay Boqorka dalka Urdun (Jordon) ayaa bilihii lasoo dhaafay baxsad ku joogtay dalka Ingiriiska iyada iyo labo caruur ah oo ay u dhashay Hogaamiyaha ka taliya Imaarada Dubai.
Amiirada iyo caruurteeda ayaa soo baxsaday xili ay fasax ku joogeen dalka Germany, isla markaana markii ugu horeysay hortagtay maxkamada London iyadoo sheegtay in ay dooneyso magangeliyo isla markaana nolosheeda ay khatar ku jirto.
Haweenaydan ayaa sanadkii 2004 noqotay xaaskii lixaad oo uu guursado Amiirka Dubai Maxamed Makhtoum oo loo dhalay caruur gaareysa 23 kuwaasi oo qaarkood la sheegay inay ku jiraan xabsi guri.
Dacwada haweenaydan u gudbisay Maxkamada London ayaa ah mid khuseysa caruurta ay dhashay oo ay isku heystaa iyada iyo Amiirka Dubai oo isagu aan imaan maxkamadii shalay.
Balse Qareenada u doodaya Amiirka Dubai ayaa ka codsaday maxkamada London in caruurtiisa dib loogu celiyo magaalada Dubai, arrintaasi oo ay diidan tahay xaaskiisa oo sheegtay inay dooneyso inay caruurteeda heysato.
Kiiskan ayaa markale banaanka u soo saaraya xiisada ka dhex taagan qoyska Amiirka Dubai oo horey loo sheegay inuu sanadihii lasoo dhaafay xabsi guri ku hayey mid kamid ah gabdhaha uu dhalay oo iyaduna sidan oo kale isku dayday inay dooni uga baxsato dalka Imaaraadka, balse lasoo qabtay xili ay mareysay bada dalka India, kadib markii doontii ay saarneyd ay qabteen ciidamada India oo dib ugu celiyey dalka Imaaraadka.